Hayzara: Sehatra fakan-kevitra ho fampandrosona an’i Madagasikara | mandimby maharo
Hayzara: Sehatra fakan-kevitra ho fampandrosona an’i Madagasikara	Posted on 29 August 2013 by Mandimby Maharo	-Tahirin-kevitra sy fahalalana,- Sehatra fifampizarana -Fijerena Saritanysy fanarahamaso no hita ao amin’ny www.hayzara.org . Tranokala iray eo ambany fiahian’ny Firenena Mikambana izy ity ary natokana ho an’i Madagasikara. Araka ireo tolotra omeny ireo dia fitaovana iray entina hamantatra ny fampandrodoana no tena tanjona nananganana azy ity.
Niainga tamin’ny tombana natao ka nahitana fa miparitaka sy tsy ampy ny fahalalana momba an’i Madagasikara no nitsirin’ny rerikasa Hayzara ny taona 2010. Ireo fahalalana ireo izay fitaovana entina mandrefy ny fampandrosona, ataon’ireo sampan’asa maro samihafa miasa eto amin’ny nosy. Azo entina mandresy lahatra ireo mpampiasa vola sy mpamatsy vola koa nefa ny tahirin-kevitra toy izao. Afahana mandray fanampahakevitra mifanaraka amin’ny zavamisy manko ny antontan-kevitra. Amin’izany koa no ananganana ny drafitrasa isan’ambaratonga. Hita amin’ny alalan’ny atonran’isa ohatra ny fiiban’ny harikarena noho ny fahadisoana teo amin’ny fampiasam-bola, ka ny fandinihana izany no entina hanitsina ny tsy nety teo aloha. Ny antonta-kevitra koa no fototra andraisana fanapaha-kevitra amin’ny ho fanohizana izay fahombiazana efa azo.
Tsy fitehirizana fotsiny nefa ny Hayzara fa ampirisihina ihany koa ny fifampizarana. Sehatra misokatra ho an’ny rehetra izy ity ka afaka mametraka ny antonta-kevitra ananany avokoa ireo rehetra te hizara izany. Fifanankalozana izay mivelatra amin’ny endriny maro toy ny boky elektronika, saritany, atontanisa, tatitra maro samihafa. Ny fifamoivoizan’ny hevitra sy ny fahalalana toy izany no mampiray ny ezaka izay atao. Miteraka fiombonan-kery izany ka hanafaingana ny asa ataon’ny tsirairay. Misy noho izany ny fivondronan’ireo manampahaizana isantsokajim-pahalalana avy izay afaka mamaha ny olana sy mandroso sosokevitra amin’ny sehatra iasany.
Tolotra omen’ny Hayzara koa ny antontan-tsaritany. Ahitana fiparitahan’ireo tetikasa sy ireo mpisehatra aratoekarena isam-paritra ireo saritany ireo. Misy ny fampahalalana isam-paritra ihany koa ,ka afahan’ny mpitsidika mahafantatra ny zavamisy any am-potony. Ireo tetikasa sy sampan’asa miasa any an-teorana mihintsy manko ny manome ny antonta-kevitra ka marina sy voazava tsara izany.
Ny fisin’ny sehatra toy ny Hayzara noho izany dia inona fa afahana manafaigana ireo fanapaha-jevitra ara-toekarena maro hentina hampandrosona an’i Madagasikara. Ka mba ho fanampaha-kevitra mifanaraka amin’ny filana sy ny zavamisy tokoa no raisina fa tsy tetikasa mivoana amin’ny ilana azy. Na dia ho maro tokoa aza manko ny famatsiam-bola ho azo, ary na dia ho voasoratra tsara ireo drafitrasa fampandrosoana dia ho very maina ireo raha toa ka tsy mitombina tsara ny fototra nandrafetana izany.
Tags: Fampandrosona, Internet, Madagasikara, ToekarenaCategories: Uncategorized